विप्लव २ वर्षपछि सार्वजनिक हुँदै, एक हजार बढी नेता कार्यकर्ता रिहा हुने – Dainik Sangalo
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ २ वर्षपछि भोली (शुक्रबार) सार्वजनिक हुँदै छन् । सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीबार भएको तीन बुँदे सहमतिपछि विप्लव नेतत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएका हुन् ।
फागुन २१ गते दिउँसो २ बजे विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह आयोजना हुने सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिए । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्दै छन् ।
सरकार-विप्लव समुहबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै सो समूहका एक हजार ३६ जना नेता कार्यकर्ता रिहाइ हुने भएका छन् । विप्लव समूहले यसअघि राज्यले आफ्ना एक हजार बढी नेता कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिएको बताएका थिए । सहमतिपछि रिहाइ हुनेमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्त प्रकाश ओली, माइला लामा लगायत छन् ।
हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै विप्लव समुहका गतिविधिमा सरकारले दुई वर्ष अघि फागुन महिनामै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मंगलबारमात्रै सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । त्यस लगत्तै प्रतिबन्धित विप्लव समूहले पनि पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएर वार्ताका लागि तयारी भएका थिए ।
Prevईलाम कन्याम घुमेर फर्किदै गर्दा मोटरसाइकल दु’र्घ’ट’नामा परि एक जोडिको मृ’त्यु भएको छ
Nextविप्लवलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइने, कहाँ छन् ‘विप्लव’ ?
कोरो*ना भन्दै श*व लुकाउन खोजेपछि लफ*डा | अस्पतालको बिज्ञप्तिमा के छ ? न्याय पाउलान त रामलखनले ?